Uyifomatha njani ikhompyuter yeWindows: inyathelo ngenyathelo lesifundo. | Iindaba zeGajethi
U-Eder Esteban | | isibulali, Tutorials
Umsebenzi oya kuwenza ngexesha elithile kukufomatha ikhompyuter. Ukufomatha i-hard drive kubandakanya ukucima yonke into egcinwe kuyo. Yinkqubo enokuthi ifune ukwenziwa ngexesha elithile. Kodwa, kukho abasebenzisi abangazi kakuhle ukuba kunokwenziwa njani.
Ke ngoko, apha ngezantsi sikubonisa amanyathelo ekufuneka uwalandele fomatha ikhompyuter yeWindows. Enye yeenzuzo ezinkulu kukuba sineendlela ezahlukeneyo zokwenza. Ke unokufumana eyona ilungele eyona nto uyifunayo kwimeko nganye.
Njengoko besitshilo, kule meko sigxila kuyo fomatha ikhompyuter yeWindows. Ukuba ufuna ntoni fomatha iMacKwikhonkco esele sikushiye, ungabona ukuba ungayenza njani ukuba ikhompyuter yakho ivela kuApple. Omnye wemibuzo yokuqala enabasebenzisi abaninzi sisizathu sokuba kwenziwe le nto. Siza kuwuphendula lo mbuzo ungezantsi.
1 Kutheni ufomatha ikhompyuter?
2 Yenza Ugcino
3 Fomatha ikhompyuter yakho: Indlela ekhawulezayo yeWindows
4 Ifomathi usebenzisa uMlawuli weDiski
5 Ifomathi igcina iifayile zakho
Kutheni ufomatha ikhompyuter?
Isizathu sokuba ukufomatha ikhompyuter kunokwahluka kakhulu. Kwelinye icala, yinto esiyenzayo ukuba kunokwenzeka ibekho ingxaki enkulu ngesixhobo. Ngale ndlela, xa uyifomatha, yonke into ekuyo iyacinywa kwaye ihlala ikwimeko efanayo naleyo besiyithenga ngayo. Into eyincedayo ukuba isebenze kakuhle kwakhona, ngesiqhelo. Kungenziwa xa wosulelwe yintsholongwane, ongenakukuphelisa.
Kananjalo ukuba yikhompyuter esebenza kancinci, ngamanye amaxesha kukho abasebenzisi ababheja kolu buchule. Okanye ukuba uthathe isigqibo sokuthengisa ikhompyuter yakho, ukuyifomatha kuyaqinisekisa ukuba akukho datha okanye iifayile ziya kuhlala kuyo. Ke, umntu oyithengayo akazukufikelela kubo.
Kodwa kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ukufomatha ikhompyuter kuthatha loo nto zonke iifayile ezikulo ziya kucinywa. Yinkqubo enobundlobongela kakhulu, kwaye kufuneka sifezekise ukuba sisisombululo esifanelekileyo kwimeko yethu.
Ke ngoko, ngaphambi kokuba siqale ukufomatha ikhompyuter, yogcino iyafuneka yazo zonke iifayile. Ngethamsanqa, ukuxhasa kulula kakhulu, kwaye sesibonisile. Ke kubalulekile ukwenza oku, ukuba awufuni kuphulukana nazo naziphi na iifayile ezikwikhompyuter yakho ngalo mzuzu.
Kuqwalaselo lwekhompyuter yethu yeWindows sinokubakho yenza ugcino ngendlela elula, ukuba usebenzisa iWindows 10. Ke yinto onokuyenza ngesandla. Ukuba akunjalo, uhlala unethuba lokusebenzisa iinkqubo ezikwi-intanethi ezikunceda kule nkqubo.
Fomatha ikhompyuter yakho: Indlela ekhawulezayo yeWindows
Ukufomatha ikhompyuter ngeendlela ezahlukeneyo. Enye yeendlela, ebonakala ngokukhawuleza kakhulu, yaziswa sele ineWindows 7. Isekhona kwiinguqulelo zamva nje zenkqubo yokusebenza kwaye ziyasivumela ukuba siyenze le nkqubo ngendlela elula ngokwenene. Akukho sidingo sokufaka iinkqubo zongezelelweyo kwikhompyuter yakho.
Into ekufuneka siyenzile, sakuba senze ugcino lwekhompyuter, kukuya kwifolda yekhompyuter yam. Kuyo, zonke ii-hard drive esizifakileyo kwikhompyuter. Kuya kufuneka siyifumane le sifuna ukuyifomatha ngeli xesha. Nje ukuba ibekho, cofa kuyo ngeqhosha lasekunene le mouse.
Okulandelayo, ufumana imenyu yeemeko kunye noluhlu lwezinto ozikhethayo kwiscreen. Enye yazo kukufomatha, ekufuneka sicofe kuyo. Siza kuthi emva koko sifumane iwindow enedatha malunga nokufomatha, kwaye ezantsi iqhosha lokuQala. Cofa kwiqhosha kwaye inkqubo yokufomatha iya kuqala.
Njengoko ubona, le ndlela yokufomatha ikhompyuter yeWindows ilula kakhulu. Nangona kunjalo, kulungile ukuyikhumbula loo nto le nkqubo ayinakwenziwa kwidrive apho inkqubo yokusebenza ifakiwe oyisebenzisayo ngalo mzuzu. Ukuba uzama, umyalezo uza kuvela kwiscreen oza kukuxelela ukuba akunakwenzeka.
Ifomathi usebenzisa uMlawuli weDiski
Enye indlela ekhoyo kwiWindows, eluncedo kakhulu ukuba uneedrive ezininzi kwiikhompyuter yakho, kukusebenzisa umphathi wediski. Inkqubo ayisiyonto ilula njengokhetho lwangaphambili. Ke ngoko, yindlela eyilelwe abo basebenzisi banamava kancinci. Nangona, wakuba ufundile ukuba isebenza njani, ayifanelanga ukuba nzima.
Ukufikelela kuMlawuli weDiski, kufuneka uthayiphe diskmgmt.msc okanye Ulawulo lweDiski kwindawo yokukhangela. Olu khetho luya kuvela kwiscreen. Kuya kufuneka ukhethe ukhetho olubizwa ngokuba yiYakha kunye nefomathi yokwahlulahlula i-hard drive. Ukuba uyafuna, sinokufikelela kule ndlela: Iphaneli yokulawula> Inkqubo kunye nokhuseleko> Izixhobo zolawulo.
Emva koko sijonga ukuba idiski esifuna ukuyifomatha ikwisikrini. Kuxhomekeke kubukhuluSiza kusebenzisa ulwahlulo olwahlukileyo kule meko. Ukuba iphezulu kune-2 TB kufuneka sisebenzise i-GPT. Ngelixa ingaphantsi kwesi sixa, kufuneka sisebenzise i-MBR. Xa siyifumene idiski, cofa ekunene kwindawo engabelweyo yediski. Emva koko khetha ukhetho olubizwa ngokuba yiVolume eNtsha elula. Emva koko khetha ubungakanani besahlulelo kwi-MB kunye nonobumba oza kuwunika le diski intsha.
Emva koko, uya kuba nakho ukufomatha idiski. Cofa ekunene kwi-drive ebuzwayo kwaye ukhethe ukhetho lwefomathi. Isivumela ukuba sifomathe yonke idiski okanye isahlulelo nje, unokukhetha ukuba yeyiphi ekufaneleyo kwimeko apho. Le ndlela isivumela ukuba ifomathiwe ikhompyuter, nangona kule meko sivela kwiyunithi ukuya kwiyunithi.
Ifomathi igcina iifayile zakho
Okokugqibela, indlela yokufomatha Windows 10 ikhompyuter, kodwa ugcine iifayile zakho. Le yindlela ekhoyo kuhlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza. Enkosi kuye, le nto siyenzayo yile buyisela ikhompyuter kwimeko yayo yentsusa, kodwa ngaphandle kokucima iifayile esinazo kuyo. Ke ithiwe thsuphu njengolona khetho luluqwalaselwe.
Ukwenza oku, singena kulungelelwaniso lweWindows 10. Emva koko, kufuneka singene kwindawo yokuhlaziya kunye nokhuseleko, edla ngokuba yeyokugqibela kwiscreen. Kweli candelo, sijonga ikholamu esekhohlo. Ukusuka kukhetho olukhoyo apho, cofa ekubuyiseni.
Emva koko uza kubona ukhetho olubizwa ngokuba yi-Reset PC. Yeyona nto inomdla kuthi kule meko. Ke ngoko, cofa ekuqaleni kwenkqubo. Into elandelayo siza kubuza ukuba sifuna ukugcina iifayile okanye hayi. Sikhetha ukhetho esilufunayo kwaye inkqubo iya kuqala. Ke, into esiyenzayo ukufomatha ikhompyuter, kodwa ngaphandle kokulahlekelwa ziifayile esinazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyifomatha njani ikhompyuter
UVictor Solis: p uqaphele
Thatha ithuba lesaphulelo kwiimveliso zeAmazon zeKoogeek